PERLITE: WAXA AY TAHAY, ADIGOO ISTICMAALAYA SIFOOYINKA MACDANTA DHIRTA - CIID
Dhibaatada aadka u badan ee bannaanka u ah ciidda aad u cufan, taas oo si aan macquul ahayn u oggolaan hawada iyo qoyaanka, ka hortagga dhirta ka soo baxa. Agroperlite waxay noqon doontaa badbaado dhab ah kiiskan, hantida iyo codsiga kaas oo aan ka wada hadli doono hoos.
Waa maxay perlite iyo astaamaha
Perlite waxay ku baahsan tahay beeraha iyo beerta, sidaas darteed qof walba waa inuu ogaadaa waxa uu yahay. Dhab ahaan, perlite waa mid ka mid ah dhagaxyada volcanic, taas oo qaabkeeda iyo muuqaalkiisa u eg yahay muraayadda.
Qeyb kasta oo perlite ah waxay ka kooban tahay 2 illaa 6% biyaha ku xiran, taas oo ah sababta kuleyliyaha perlite uu u kordhi karo cabirkiisa 4 ama 20 jeer. Perlite, ama agroperlite, sida loo yaqaan, ayaa sidoo kale qarxi kara. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay suurtogal u tahay marka la kulmo ilaa 870 ° C
Waxyaabaha kiimikada ee perlite waa mid isku dhafan:
65-75% waa silicon dioxide;
10-16% - alumina;
ilaa 5% - oxidii potassium:
ilaa 4% - Oxy sodium;
ilaa 3% - oxide birta;
ilaa 1% - oxygen oxygen;
2-6% - biyo.
Perlite way kala duwan tahay midabkiisa. Si kastaba ha ahaatee, marar badan oo cad ama perlite ah ayaa loo isticmaalaa beeraha, si kastaba ha noqotee, madow, guduud ah oo bunni ah, cagaar iyo bunni ah ayaa laga helaa. Laga soo bilaabo midabka perlite ma badalo hantida iyo codsiga.
Waa muhiim! Maskaxda ku hay in lagu daro perlite cad ama hufan oo isku dar ah ciidda loogu talagalay dhirta aad ku adkeynayso geeddi-socodka baaritaanka ciidda loogu talagalay joogitaanka cayayaanka kala duwan. Gaar ahaan, qaybo ka mid ah perlite ayaa si fudud loogu jahwareerin karaa xididdada rootiga iyo qoryaha, iyo sidoo kale dirxiga ee kaneecada musqusha. Calaamadi jiritaanka cayayaanka ayaa suurtogal ah in ay tahay uun geedka.
Waxaa jira noocyo badan oo perlite ah, kuwaas oo loo isticmaalo meelo kala duwan, laakiin kuwa ugu caansan waa ballaariyey iyo xirmooyinka.
Perlite ballaariyay waxaa loo isticmaalaa oo kaliya beeraha, halka in warshadaha dhismaha, warshadaha saliidda, metallurgy, daawada iyo warshadaha cuntada waa perlite ugu caamka badan. Aan u eegno iyaga si gaar ah, taas oo noo ogolaaneysa in aan fahanno sababta nooc kasta oo perlite ah loo baahan yahay dhirta iyo dhismaha.
Kordhinta perlite - waa perlite dabiici ah, kaas oo lagu gubay heerkulkiisa sare ee foornada khaaska ah. Sababta saameynta heerkulka dhagaxa laga bilaabo 850 illaa 1250 ° C, way barartay oo waxay u egtahay sida salool. Iyadoo ku xiran baaxadda laftirka loo yaqaan 'perlite', waxay noqon kartaa xumbo ama isku mid ah.
Magac kale oo loogu talagalay perlite ballaariyey agroperlite, maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa beeraleyda.
Xayeysiisyada sii kordhaya waxay leeyihiin sifooyinka soo socda:
Dab-damiska (ilaa 900 ° S).
Kartida fiican ee nuujinta (absorbs ilaa 400% miisaanka).
Cadaadiska bayoolojiga (perlite-kiisa la ballaariyay ma laha ujeedka, xoqidda, cayayaan, jiirka aan ku noolayn).
Ilaalinta xayawaanka iyo nadiifinta.
Inta badan, balaarinta perlite loo isticmaalo geedo, kuwaas oo u baahan badan oo qoyaan iyo aad u dareemaan isbedelka heerkulka. Si kastaba ha noqotee, floriculture ayaa weli ah goobaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo, maaddaama perlite loogu talagalay ubax waa nidaam dheeri ah iyo nidaam looga hortago qalajinta sare ee dheriga. Waxaa laga yaabaa inay la mid tahay sababtoo ah in perlite uu awood u leeyahay inuu ku ururiyo qoyaan, ka dibna u si carrada.
Xaytada Perlite wuxuu leeyahay baaxad ballaaran oo adeegsi ah, iyo su'aasha ah sababta loo baahan yahay, ugu horreyntii ayaa ina keenaysa dhismaha dhismaha. Marka lagu daro perlite qaabka dhismaha qalabka dhismaha, waxaa suurtogal ah in ay si weyn u kordhiyaan iska caabin ay u geystaan ​​dabka.
Intaa waxaa dheer, mahadsanayaal dhismaha perlite ayaa noqonaya mid dardar leh, oo khafiif ah oo hooseeya. Codso perlite ee warshadaha noocan oo kale ah:
Wax soo saarka saliidda iyo gaasta. Tan iyo markii perlite yahay nadaafad wanaagsan, waxaa loo isticmaalaa in lagu nuugo saliidda shidaalka iyo gaaska, taas oo markaa si fudud loo gubi karo.
Adeegyada Guryeynta iyo Bulshada. Perlite waxaa loo isticmaalaa biyo nadiifinta biyaha magaalada.
Warshadaha Cuntada. Perlite waxaa loo isticmaalaa sida filterka ah ee lagu nadiifiyo sharoobada sonkorta iyo saliidda cuntada.
Ecology. Thanks to perlite, nadiifinta firfircoon ee haraaga iyo dhulalka ka soo gaadhay hawada wasakhaysan waa la fuliyaa. Ujeedadaas darteed, balaarinta perlite ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa.
Metallurgy. Marka lagu daro perlite-ka, waxaa soo baxaya inuu ku guuleysto qaabdhismeedka pearlite ee birta.
Dawada Perlite waxaa loo isticmaalaa sidii sheyga loogu talagalay diyaarinta daawada.
Ma taqaanaa? Perlite waxaa loo isticmaalaa xitaa hookahs. Ujeedadaas awgeed, waxaa la gooyaa glycol propylene iyo dhadhanka kala duwan, ka dibna la dhigo hookah halkii tubaakada.
Sidee ayuu perlite ee dhirta
Qodobada lagu sharraxay waxay tilmaamayaan waxa ay isticmaalaan perlite ee beeraha. Iyada oo ay jirto qaab-dhismeedkiisa iyo awooda lagu ilaalinayo qaabkeeda, ma aha mid toosan oo aan la isku darin, waxaa si weyn loo isticmaalaa in la daboolo ciidda oo lagu wanaajiyo tayada sida hawada iyo biyaha.
Perlite sidoo kale waa ku habboon tahay dhirta gudaha, iyo sida loo isticmaalo kiiskan ma aha adag tahay in la qiyaaso - waa perlite in lagu shubo hoose ee dheriga si loo sameeyo hawlaha dheecaan. Marka perlite loo isticmaalo floriculture, waxaa jira horumarin calaamad ah ee koritaanka dhirta, iyo sidoo kale ubax.
Agroperlite waxaa lagu daraa ciidda xitaa ka hor inta aan cawska laga beerin garoonka kubadda cagta, iyo sidoo kale marka la diyaarinayo koorsooyinka golf. Sida loo isticmaalo si sax ah, waxaan ku sharxi doonaa hoos.
Xeerarka isticmaalka perlite ee dhirta: sida loo isticmaalo perlite
Xitaa haddii aad fahamsan tahay waxa perlite yahay, waxaad u isticmaali kartaa beerta iyo qalabka korontada ku shaqeeya siyaabo kala duwan:
Sida dufanka. Xaaladdan oo kale, lakabka ah 3-5 cm of agroperlite saafi ah ayaa si fudud ku shubay hoose ee dheriga.
Wixii aasaasida. Bannaanka u badan ayaa xiisaynaya su'aasha sida loo isticmaalo perlite for rooting dhirta in muujinaysa koritaanka saboolka ah ee carrada caadiga ah. Xaaladdan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo perlite daahirsan, oo si fiican u waraabiyo. Sababtoo ah maqnaanshaha nooc kasta oo jeermis ah ee pearlite, itimaalka ah ee dillaacsan ee xididdada caleemaha dhalinyarada waa laga saarayaa.
Sida kudheer ah ciidda isku dhafan. Isku dar ah oo la mid ah perlite waxaa lagula talinayaa ubaxyo iyo dhirta oo leh nidaam xidid daciif ah. Wixii diyaarinta ee qaybaha siman perlite, chernozem iyo peat waa isku dhafan (waxaa lagu bedeli karaa humus).
Si kor loogu qaado huurka hawada dhirta kulaylaha u baahan. Xaaladdan, waxaad ubaahan tahay inaad ku dhejiso baakado dheeraad ah oo leh perlite qoyan oo u dhaw dhirta ubaxa.
Wixii beereed miraha yar yar. Iyada oo ay sabab u tahay isku dhafka abuurka leh ganaaxyada agroperlite, waxaa suurtagal ah in la gaaro qaybinta lebiska ee qaybta ama sanduuqa.
Sida mulch. Haddii aad xirto dusha ubaxa dhoobada ah, waxay ka hortagi doontaa kor-mareenka inuu qalajiyo oo u ogolaado hawada si joogto ah u socodka nidaamka xididka ubaxa.
Sida saldhig u ah Bacriminta. Si arrintan loo sameeyo, waa ku filan inaad ku shubto perlite leh bacriminta macdanta lagu qasi jiray biyo iyo rusheeyo ciidda ku wareegsan dhirta leh. Waqti ka dib, perlite wuxuu bilaabi doonaa in uu siiyo qoyaan iyo bacriminta carrada.
Waa muhiim! Badanaa perlite waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo kala duwan, oo ka mid ah ciidadu sidoo kale ay joogaan. Iyadoo la shaqeyneysa, ciidku wuxuu ku degi karaa mareenka neef-mareenka iyo indhaha qof, isaga oo sababaya raaxo daran. Si looga hortago, waxaa habboon in la shaqeeyo perlite oo keliya muraayadaha iyo neefka.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida isticmaalka perlite
Iyadoo la macaamilay xaqiiqda ah in cayayaanka noocan oo kale ah ee dhirta, waxaa habboon in ay si faahfaahsan u degaan faa iidooyinka faraskan iyo faa'iido darrada ay sidoo kale leedahay. Aynu bilowno faa'iidooyinka:
Perlite waa walax asal ahaan saafi ah kaas oo ka dhigaya suurtagalnimada in si wax ku ool ah loola dagaalamo cudurrada iyo cayayaanka dhirta in ka badan ciidda.
Perlite waa lagama maarmaanka ah kiisaska carrada beerta aad u cufan iyo dhirta leh nidaamka xidid daciif ah ma kori karo on.
Perlite wuxuu awoodaa inuu ururiyo qoyaan iyo quudinta dhirta muddo dheer.
Perlite ma ahan cake, taas oo macnaheedu yahay in xitaa ka dib muddo dheer maaha mid awood u leh in la yareeyo biyaha iyo gogosha hawada ee ciidda.
Perlite waxay bixisaa rinjir.
Ma taqaanaa? Perlite waxaa loo isticmaali karaa ma aha oo kaliya dhirta sii kordhaysa, laakiin sidoo kale in la ilaaliyo dalagga soo baxay. Haddii sidoo kale lagu daaweeyo fungicides, waxaa suurtogal ah in laga fogaado ma aha oo kaliya khudaarta iyo khudradda, laakiin sidoo kale si looga ilaaliyo lakab. Si kastaba ha ahaatee, si loo helo natiijo isku mid ah, waxaa lagu talinayaa in la saaro lakabka perlite inta u dhaxaysa ugu yaraan 5 cm inta u dhaxaysa lakabyada miraha.
Si kastaba ha noqotee, markaad isticmaasho perlite, waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyinkaas
Perlite si liidata ayaa loo qaybiyaa iibinta, kharashkuna waa mid aad u sareeya. Waxaa sabab u ah inuu ku guuleystey jacayl kaliya oo leh beeraha ubax, halka bannaanka iyo bannaanka u isku dayaan in ay ku fekeraan isbarbardhiga udhaxeeya perlite.
Perlite wuxuu leeyahay pH dhexdhexaad ah. Sidaa darteed, iyada oo isticmaalkeeda si degdeg ah, heerkulka aaladda ciidda ayaa kordhin kara, taas oo aan loo baahnayn beerta iyo dhirta gudaha.
Marka la eego dhammaan khasaarihii lid ku ah perlite, waxaad isticmaali kartaa iskudhafidooda, kuwaas oo mararka qaarkood xitaa noqon kara bilaash. Waxaan ka hadleynaa dhoobo ballaaran, jajabyo jilicsan, ciid iyo bacrimid. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in mid kasta oo ka mid ah kuwan isku mid ah ay sidoo kale leedahay cillado.
Waxaan rajeyneynaa in su'aasha ah in perlite lagu daro ciidda ayaa si buuxda u caddayn? oo hadda waxaad ku hagaajin kartaa dhammaan cilladaha ku jira ciidda beertaada. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in isticmaalka perlite ee beerista ma aha had iyo jeer caqligal ah iyo xaaladaha qaarkood waxay yeelan karaan cawaaqib xun.